Ya na ndị agha Taliban na -ejegharị n'obí onye isi ala na Kabul dị ka ndị nduzi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Ya na ndị agha Taliban na -ejegharị n'obí onye isi ala na Kabul dị ka ndị nduzi
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị Taliban nọ n'obí onyeisiala
Akpọpụtala onye ndu Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar onye isi ala Afghanistan.
Ndị agha Taliban na -enye ndị nta akụkọ Al Jazeera ohere foto site n'ọfịs onye isi ala na Kabul.
Onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani ahapụla Afghanistan ka ndị Taliban na -emechi na Kabul, dị ka onye mkparịta ụka udo nke mba ahụ Abdullah Abdullah kwuru.
Al Jazeera TV na -agbasa ozi mkpuchi pụrụ iche site n'ime ụlọ na -egosi ndị Taliban FIghters nọ ọdụ n'ọfịs onye isi ala na Kabul.
The Ụlọ ọrụ nnọchite anya US na Kabul na -akụziri ndị Cirizin US banyere akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu Kabul na -ere ọkụ. Ndụmọdụ nye ndị Amerịka tọrọ atọ na Afghhanistan ka ha gbaba n'ime ebe
Ndị Taliban ga -ekwupụta Alakụba Alakụba nke Afghanistan
Ọchịchị ndị Taliban na -eme atụmatụ ịkpọgharị Afghanistan ka ọ bụrụ Emirate Alakụba nke Afghanistan.
Ka ọ dị ugbu a, United States na -eziga ndị agha 6000 ozugbo na Afghanistan, ndị a bụ 1000 ọzọ na 5000 ugbua n'ụzọ.
Ndị nta akụkọ na-akọ maka netwọ akụkọ sitere na Qatar Al Jazeera a kpọrọ ha taa ka ha gaa leta onye isi ala na Kabul, Afghanistan. Ndị agha Taliban ji egbe egbe na -apụta n'ọfịs onye isi ala.
O yiri ka ụjọ na ụjọ dị, mana enweghị mwụfu ọbara a kọọrọ na isi obodo CIty nke Kabul taa na ndị agha Taliban na -achịkwa obodo ahụ na ọsọ ọsọ.
It malitere n'ụtụtụ na Sọnde, Ọgọst 15, wee mechie n'abalị. Afghanistan laghachiri n'okpuru ndị Taliban mgbe afọ 20 gasịrị, puku ijeri na -emefu iji gbochie ha.
Mbubreyo na Sọnde, ekwuputara na Ghani ahapụla ọtụtụ ndị otu ụlọ ọrụ ya.
“Onye isi ala Afghanistan mbụ hapụrụ Afghanistan. Ọ hapụla mba na steeti a [maka nke ahụ] Chineke ga -aza ya ajụjụ, "Abdullah Abdullah, onye isi oche nke kansụl ukwu maka imezi mba, kwuru na vidiyo ezigara na ibe Facebook ya.
Ọdịda nke gọọmentị na-akwado ọdịda anyanwụ na Kabul na-abịa mgbe ndị Taliban blitzkrieg malitere na August 6 wee bute njide karịa ógbè iri na abụọ na Afghanistan n'ụtụtụ Sọnde.
Onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani agbala Afghanistan na Tajikistan. Nke a bụ ihe ụmụ amaala Afrịka na -ahụ enweghị mmasị.
Mba ọdịda anyanwụ nwere nkụda mmụọ na -ama jijiji ịchụpụ ndị ọrụ nnọchi anya ụlọ ọrụ. Prime Minista UK Boris Johnson na -agba mba dị iche iche ume ka ha ghara ịmata gọọmentị Taliban maka Afghanistan.
Ọ na -achọsi ike: Ndị mmadụ nọ n'ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu na -anwa ịgbanahụ ndị Taliban nwere Afghanistan
Enwere ihe dị ka ụmụ amaala Nepal 1500 na Afghanistan. Ozi ala ọzọ nke Nepal kwuru na Nepal na -anwa ime ndokwa iji nyere ụmụ amaala ya aka ịhapụ Afghanistan.
France bugara ụlọ ọrụ nnọchite anya ha na mpaghara ọdụ ụgbọ elu dị na Kabul, ebe akụkọ US na -ekwu na ọdụ ụgbọ elu na -agba ọkụ ma mechie. Ebufela ndị nnọchi anya EU na ebe ndị amabeghị.
Na -agbasa: Ọgba aghara na ọdụ ụgbọ elu Kabul dị na Afghanistan ka ọtụtụ narị mmadụ na -agbalị ịgbapụ obodo ozugbo enwere ike. pic.twitter.com/jwui8bjbFs
- Akwụkwọ mpempe akwụkwọ (@TheInsiderPaper) August 15, 2021
Ọgba aghara na Kabul AIrport
Ndị nnọchianya na -agba ọsọ ịgbapụ. Hụrụ site na ụlọ ọrụ nnọchi anya Pakistan na Kabul, Afghanistan
Ngalaba Ọchịchị na United States bipụtara mkparịta ụka a na odeakwụkwọ nke United States Anthony Blinken na ABC News
Antony J. Blinken, odeakwụkwọ nke State
AJỤJỤ: Ugbu a ọ bụ odeakwụkwọ nke State Tony Blinken. Odeakwụkwọ Blinken, daalụ maka isonyere anyị.
Odeakwụkwọ BLINKEN: Daalụ maka inwe m.
AJỤJỤ: Ka anyị malite site n'ọkwa nnọchite anya obodo anyị na Kabul. Ị kwenyesiri ike na nchekwa nke ndị ọrụ America nọ n'ụlọ ọrụ nnọchite anya ọbụlagodi ndị Taliban gbara Kabul gburugburu?
Odeakwụkwọ BLINKEN: Nke ahụ bụ ọrụ otu maka m, John. Anyị na -arụ ọrụ ịhụ na ndị ọrụ anyị nọ na nchekwa. Anyị na -ebugharị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke ụlọ ọrụ nnọchi anya anyị n'otu ebe n'ọdụ ụgbọ elu. Ọ bụ ya mere Onye isi ala ji ziga ọtụtụ ndị agha iji jide n'aka na, ka anyị na -aga n'ihu na -agbada ọnụnọ nnọchi anya anyị, anyị na -eme ya n'ụzọ dị mma ma dịkwa n'usoro ma n'otu oge ahụ na -enwe ọnụnọ nnọchi anya gọọmentị na Kabul.
AJỤJỤ: Ya mere, ka m hụ na m nụrụ gị nke ọma. Ị na -ebugharị ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ nnọchi anya obodo - nke ahụ ọ pụtara na ị na -emechi ụlọ ọrụ nnọchi anya US na Kabul, na a ga -ahapụ ụlọ ahụ?
SECRETARY BLINKEN: Ugbu a, atụmatụ anyị na -etinye n'ọrụ bụ ịkwaga ndị ọrụ n'ogige ndị nnọchi anya obodo na Kabul gaa ebe dị n'ọdụ ụgbọ elu iji hụ na ha nwere ike rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu yana ọfụma, ka ha gaa n'ihu na -ahapụ ndị mmadụ ka ha pụọ ​​na Afghanistan. anyị na -eme kemgbe Eprel - ngwụsị Eprel, Eprel 28th. E nyela anyị iwu ịpụ kemgbe ahụ. Anyị emeela ya nke ọma. Anyị emezigharị dabere na eziokwu dị na ala. Ọ bụ ya mere anyị ji nwee ikike n'aka Onye isi ala zitere iji hụ na anyị nwere ike ime nke a n'udo ma dịkwa n'usoro. Mana ogige ahụ n'onwe ya - ndị anyị na -ahapụ ebe ahụ kwaga n'ọdụ ụgbọ elu.
AJỤJỤ: Akwụkwọ dị n'ime wee pụta na ndị ọrụ ụlọ ọrụ nnọchi anya Fraịde nyere ndị ọrụ Amerịka nọ na ụlọ ọrụ nnọchiteanya ahụ ka ha belata ọnụ ọgụgụ ozi dị nro na ụlọ ahụ, ọ sịkwara, “Biko… ihe ndị enwere ike iji mee ihe na mbọ mgbasa ozi. ” Nke a bụ nchegbu doro anya ebe a bụ na ndị Taliban - na nke a bụkwa, echere m, ihe kpatara ị na -ebuga ndị mmadụ n'ọdụ ụgbọ elu - na ndị Taliban ga -akarị wee weghara ogige ụlọ ọrụ nnọchiteanya ahụ.
Odeakwụkwọ BLINKEN: Nke a bụ usoro ọrụ ọkọlọtọ n'ọnọdụ ọ bụla. Enwere atụmatụ dị ma ọ bụrụ na anyị na -ahapụ ogige ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ, na -ebugharị ndị anyị ebe ọzọ, iji were usoro ndị ahụ niile, ndị ị ka depụtara. Yabụ na nke a bụ ihe anyị ga -eme na nke ọ bụla n'ime ọnọdụ ndị a, ọzọkwa, a na -eme nke a n'ụzọ akpachapụrụ anya, a na -eme ya n'usoro, a na -ejikwa ya na ndị agha America ebe ahụ iji hụ na anyị nwere ike ime ya. n'ụzọ dị nchebe.
AJỤJỤ: N'nkwanye ugwu, ọ bụghị ọtụtụ ihe anyị na -ahụ ka ọ na -adị n'usoro ma ọ bụ na -arụ ọrụ. Naanị ọnwa gara aga, Onye isi ala Biden kwuru na n'ọnọdụ ọ bụla - nke ahụ bụ nke ya - nke ahụ bụ okwu ya - n'ọnọdụ ọ bụla enweghị ndị ọrụ US, a ga -ebupụ ndị ọrụ nnọchi anya Kabul na ngosipụta ihe nkiri anyị hụrụ na Saigon na 1975. Nke ahụ ọ́ bụghị kpọmkwem ihe anyị na -ahụ ugbu a? Echere m, ọbụlagodi onyonyo na -akpalite ihe mere na Vietnam.
Odeakwụkwọ BLINKEN: Ka anyị laghachi azụ. N'ezie, nke a abụghị Saigon. Eziokwu nke okwu a bụ nke a: Anyị gara Afghanistan afọ 20 gara aga na -eburu otu ebumnuche n'uche, nke ahụ bụ ịkpaso ndị wakporo anyị na 9/11. Na na ozi ọma. Anyị wetara bin Laden ikpe ziri ezi afọ iri gara aga; al-Qaida, ndị otu wakporo anyị, belatara nke ukwuu. Ike ya ịwakpo anyị ọzọ site na Afghanistan abụrụla-ugbu a adịghị adị, anyị ga-ahụkwa na anyị debere ikike na mpaghara ahụ, ikike dị mkpa iji hụ mpụta ọ bụla nke iyi ọha egwu na iji nwee ike ịnagide ya. Yabụ n'ihe gbasara ihe anyị kpebiri ime na Afghanistan, anyị emeela ya.
Ma ugbu a, n'oge niile, Onye isi ala nwere mkpebi siri ike ime, na mkpebi ahụ bụ ihe a ga -eme ndị agha fọdụrụ nke anyị ketara mgbe anyị batara n'ọchịchị nọ na Afghanistan, yana oge ngwụcha nke nchịkwa gara aga guzobere iji nweta ha. ruo mgbe Mee 1. Nke ahụ bụ mkpebi o mere. Anyị anọla na Afghanistan afọ 20 - ijeri $ 1, ndụ ndị America 2,300 furu efu - ọzọ, ekele, na -eme nke ọma n'ime ihe anyị kpebiri ime na mbụ. Onye isi ala ahụ kpebisiri ike na oge eruola ịkwụsị agha a maka United States, ịpụ n'etiti agha obodo na Afghanistan, na ijide n'aka na anyị na -elele ọdịmma anyị n'ofe ụwa, gburugburu ụwa, nakwa na e hiwere anyị ịkwalite ọdịmma ndị ahụ. Nke ahụ bụ ihe anyị na -eme.
AJỤJỤ: Mana ndị isi ndụmọdụ agha ya dụrụ onye isi ala ahụ, dịka m ghọtara, ịhapụ ụfọdụ ọnụnọ ndị agha na mba ihe dị ka ndị agha US 3-4,000. Enwere akwa ụta ọ bụla ugbu a na ọ nabataghị ndụmọdụ ahụ, ndụmọdụ nke ndị ndụmọdụ ya kacha elu, ịhapụ ụfọdụ ọnụnọ ndị agha na Afghanistan?
SECRETARY BLINKEN: Nke a bụ nhọrọ Onye isi ala chere ihu. Ọzọkwa, cheta na nchịkwa gara aga nke Mee 1st guzobere oge ime ka ndị agha fọdụrụ na Afghanistan pụọ. Na echiche na anyị gaara akwagide ọnọdụ dị ugbu a site na idobe ndị agha anyị ebe ahụ echere m na ọ dị njọ, n'ihi na nke a bụ ihe gaara eme ma ọ bụrụ na Onye isi ala kpebiri idobe ndị agha ahụ ebe ahụ: N'ime oge site na mgbe nkwekọrịta ahụ ruru May 1st, ndị Taliban akwụsịla ịwakpo ndị agha anyị, kwụsị ịwakpo ndị agha NATO. Ọ kwụsịla nnukwu mwakpo a nke anyị na -ahụ ugbu a iji nwaa iweghara obodo a, ịga n'isi obodo ndị a, nke n'izu ndị na -adịbeghị anya ọ gara nke ọma ime.
Bịa Mee 2, ọ bụrụ na Onye isi ala kpebiri ịnọ, mgbanaka niile gaara apụ. Anyị gaara eso ndị Taliban laghachi agha. Ha gaara ebuso ndị agha anyị agha. Anyị gaara enwe puku abụọ na narị ise ma ọ bụ karịa ndị agha fọdụrụ na mba ahụ nwere ike ikuku. Echeghị m na nke ahụ gaara ezu iji mee ihe anyị na -ahụ, nke bụ mkparị gafee mba ahụ niile, m ga -anọkwa na mmemme a na ihe atụ a nwere ike ịkọwa ihe kpatara anyị ji eziga iri puku kwuru iri puku. ndị agha laghachi azụ na Afghanistan iji gaa n'ihu agha obodo ahụ kwenyere na ọ ga -akwụsị mgbe afọ 2,500 gasịrị, ijeri $ 20, na ndụ 1 furu efu, na ihe ịga nke ọma na iru ebumnuche anyị setịpụrụ mgbe anyị batara na mbụ.
AJỤJỤ: Ka m kpọọ gị ihe Onye isi ala Biden kwuru na mbido afọ a mgbe a jụrụ ya maka atụmanya nke ihe, n'ụzọ bụ isi, anyị na -ahụ ugbu a, onye Taliban weghaara Afghanistan:
"O yikarịrị ka a ga -enwe ndị Taliban ga -emeri ihe niile na inwe obodo niile bụ ihe a na -atụghị anya ya."
Yabụ na ụlọ ọrụ ọgụgụ isi nke ya duhiere ya? Ndi enye ikokopke uyo mmọ? Gịnị mere o ji hie nne na nke ahụ?
Odeakwụkwọ BLINKEN: Ihe abụọ. O kwuru na anyị ekwuola oge niile na ndị Taliban nọ n'ọnọdụ ike. Mgbe anyị batara n'ọfịs, ndị Taliban nọ n'ọnọdụ ya kachasị ike n'oge ọ bụla kemgbe 2001, ebe ọ bụ n'ọchịchị ikpeazụ na Afghanistan tupu 9/11, ọ nweela ike iwulite ikike ya n'ime afọ ole na ole gara aga. ụzọ dị mkpa. Yabụ na nke ahụ bụ ihe anyị hụrụ ma buru ụzọ hụ.
N'ikwu nke ahụ, ndị nchekwa nchekwa Afghanistan - ndị nchekwa nchekwa Afghanistan nke anyị tinyegoro, mba ụwa etinyela ego maka afọ 20 - wulite ike 300,000, kwadebe ha, guzo n'akụkụ ndị agha ikuku nke ha nwere na ndị Taliban. enweghị - ike ahụ enweghị ike ịchekwa obodo a. Nke ahụ mekwara ngwa ngwa karịa ka anyị tụrụ anya ya.
AJỤJỤ: Yabụ kedu ihe ihe a niile pụtara maka onyonyo America na ụwa yana maka ihe Onye isi ala Biden kwuru nke ọma, mkpa ịlụ ọgụ n'aha ọchịchị onye kwuo uche ya na ụkpụrụ ochichi onye kwuo uche ya, ịhụ ka anyị na -apụ na otu ndị na -eme ihe ike na -abata were ike. nke chọrọ imechi ikike ụmụ agbọghọ ịga ụlọ akwụkwọ, nke na -egbu ndị agha na -enyefe onwe ha, nke ahụ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe nnọchianya nke ụkpụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya nke Onye isi ala Biden kwuru na United States ga -akwado?
Odeakwụkwọ BLINKEN: Ya mere echere m na enwere ihe abụọ dị mkpa ebe a. Nke mbu, a ga m alaghachi n'echiche a na n'ihe gbasara ihe anyị kpebiri ime na Afghanistan - ihe kpatara anyị ji nọrọ ebe ahụ, iji lụso ndị wakporo anyị ọgụ na 9/11 - anyị nwere ihe ịga nke ọma n'ime nke ahụ. Na ozi ahụ echere m na ọ ga -ada ụda nke ukwuu.
Ọ bụkwa eziokwu na ọ nweghị ihe ndị na -asọ mpi atụmatụ anyị gburugburu ụwa ga -achọ karịa ịhụ ka anyị na -agbada na Afghanistan afọ ise, iri, ma ọ bụ iri abụọ ọzọ. Nke ahụ abụghị maka ọdịmma mba.
Ihe ọzọ bụ nke a: Mgbe anyị tụlere ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị, ndị niile megorola ndụ ha, nke a na -ama jijiji. Ọ bụ ihe siri ike. Enweela m ọtụtụ ndị isi nwanyị a bụ ndị megorola mba ha na ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ nọ na Afghanistan n'ime afọ 20 gara aga, gụnyere n'oge na -adịbeghị anya Eprel mgbe m nọ na Kabul. Echere m na ọ bụ ihe dị mkpa ugbu a na mba ụwa ime ihe niile anyị nwere ike iji ngwa ọ bụla anyị nwere - akụ na ụba, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị - ịgbalị ịkwado uru ndị ha nwetaworo.
N'ikpeazụ, ọ bụ maka ọdịmma ndị Taliban-ha ga-eme mkpebi ahụ, mana ọ bụ maka ọdịmma onwe ha ma ọ bụrụ n'ezie na ha na-achọ nnabata, nnabata mba ụwa; ọ bụrụ na ha chọrọ nkwado, ọ bụrụ na ha chọrọ ka ewepụ mmachi - ihe a niile ga -achọ ka ha kwado ikike ndị bụ isi, ikike ndị bụ isi. Ọ bụrụ na ha emeghị ma ọ bụrụ na ha nọ n'ọkwa ike ma ha emeghị nke ahụ, mgbe ahụ echere m na Afghanistan ga -abụ steeti pariah.
AJỤJỤ: Odeakwụkwọ nke Ọchịchị Tony Blinken, daalụ nke ukwuu maka isonyere anyị n'ụtụtụ a.